भखरै बिहे गरेर ल्याएकि श्रीमतिको पहिले नै ८ जना पुरुषसँग सम्बन्ध रहेकाे थाहा पाएपछि… – Sidha Post 24
भखरै बिहे गरेर ल्याएकि श्रीमतिको पहिले नै ८ जना पुरुषसँग सम्बन्ध रहेकाे थाहा पाएपछि…
By admin On Jul 21, 2021
भखरै बिहे गरेर ल्याएकि श्रीमतिको पहिले नै ८ जना पुरुषसँग सम्बन्ध रहेकाे थाहा पाएपछि… । एक जना महिलाले कति जना पुरुषसँग विवाह गर्लिन, एकजनासँग वा दुईजनासँग तर एक महिलाले भने विवाहमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेकी छन् । एकपछि अर्को गर्दै ती महिलाले ९ जना पुरुषसँग प्रेम विवाह गरिन् । घ´टना सार्वजनिक भएपछि महिलाका आठौं पतिले प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरे ।।
प्रहरीले उक्त घटनामा सम्झौताका लागि धेरै प्रयास गर्यो तर कुरा मिलेन । महिलाले नवौं पतिसँग प्रेम गरेको बताइन् र उनीसँगै हिँडिन् । प्रहरीका अनुसार भारतको लखीमपुर शहरको सदर क्षेत्रमा बस्ने महिलाको १० वर्ष पहिले सोही ठाउँका एक युवकसँग विवाह गरेकी थिइन् । केही दिनपछि पती–पत्नीबीच खटपट भयो । त्यसपछि महिलाले पतिसँगको नाता तोडेर आफ्नै मर्जीले दोस्रो युवकसँग विवाह गरिन् ।।
दोस्रो पुरुषसँग पनि केही समय विताएर उनले तेस्रो पुरुषसँग विवाह गरिन् तर तेस्रो पुरुषसँगको सम्बन्ध पनि धेरै दिन टिक्न सकेन । हरेक पटक महिलाको उनका पतिसँग मनमुटाव हुँदै आयो र उनले जतिपटक मनमुटाव भयो सम्बन्ध तोड्दै नयाँ पुरुषलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउँदै गइन् । आठौं पटकको विवाह पछि सम्बन्धमा केही स्थायित्व आयो ।
पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
बिवाह गर्दा पनि गाली, गर्भवती हुँदा पनि गाली, आखिर प्रियंका प्रति यति धेरै घृणा किन ?
के महिलाले ह स्त मै थु न गरेको राम्रो हो ? जानी राखौं ।
अर्थमन्त्री शर्माको बोल्डले गर्‍यो यस्तो निर्णय, सांसदहरु को दशैं भत्ता खारेज (सहि वा…
अब सलोन बस्नेतलाई महानायक बनाउछु : सोभित बस्नेत
पुरुषका नजरमा ठूला स्त :न किन आकर्षक मानिन्छन् ?
3 सेकेन्ड भित्र Om लेखी माथि लाइक गर्नुहोला सोचेको काम बन्नेछ
अर्थमन्त्री शर्माको बोल्डले गर्‍यो यस्तो निर्णय, सांसदहरु को…
मैले गर्दा प्रकाश सुबेदीको घरमा भात पाकिराको छ : पुजा शर्मा
3 सेकेन्ड भित्र Om लेखी माथि लाइक गर्नुहोला सोचेको काम…
अर्थमन्त्री शर्माको बोल्डले गर्‍यो यस्तो निर्णय,…
मैले गर्दा प्रकाश सुबेदीको घरमा भात पाकिराको छ : पुजा…
© 2021 - Sidha Post 24. All Rights Reserved.